दुई महिनामै बदनाम भए देउवा « Drishti News – Nepalese News Portal
दुई महिनामै बदनाम भए देउवा
६ आश्विन २०७८, बुधबार 7:36 pm
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाँचौ कार्यकाल पनि विगतभन्दा केही फरक हुने छाँट देखिएन । प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनामै उनी बदनाम भइसकेका छन् ।
एकातर्फ ठूलो संख्यामा विभूषण दिइएको छ भने, अर्काेतर्फ विवादास्पद व्यक्तिहरु समेत यसमा परेका छन् । गत वर्ष समयमा मल नल्याएर कारबाहीमा परेका ठेकदार हुमराज कोइरालालाई विभूषण दिइएको छ । सामान तस्करीमा जेल परेर छुटेका सशस्त्र प्रहरीका एसपी हर्कराज पन्तले समेत पदक पाएका छन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यापारी कैलाशचन्द्र गोयल पनि पुरस्कृत भएका छन् । त्यस्तै कतिपय गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका व्यक्तिले समेत विभूषण पाएका छन् । ‘यस पटकको विभूषणमा सोर्सफोर्स मात्र होइन आर्थिक चलखेल समेत देखियो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो लाजमर्दाे अवस्था कहिल्यै देखिएको थिएन ।’ सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच समेत विभूषण भागबन्डा गरिएको छ ।
जसकारण विभूषणले सरकारलाई चरम विवादमा पारेको छ । कतिसम्म भने गत वर्ष करिब ६ सय विभूषण वितरण गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत यसको आलोचना गरेका छन् । गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीसमेत विभूषणको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला यसरी २० करोड भन्दा धेरै खर्च हुने गरी वितरण गर्न लागिएको विभूषणको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यो मात्र होइन एकपछि अर्काे कारण सरकार बदनाम हुन थालेको छ ।
मन्त्री छैनन्, कर्मचारीमा व्यापक हेरफेर
काँग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित भई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका देउवाले कर्मचारीतन्त्रमा भने व्यापक हस्तक्षेप गरेका छन् । गत हप्ता १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्दा कतिपयलाई ६ महिनामै सरुवा गरेर आफू निकटलाई पठाएका थिए ।
गृहमा कामै नगरेका तर विवादास्पदहरुलाई समेत सिडिओमा पठाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायमा सेटिङका मान्छे लगेर आर्थिक चलखेल गर्न आरजु राणा देउवाले नै डिल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
प्रहरीमा पनि सरकारले व्यापक हस्तक्षेप गरेको छ । ओली सरकारले गरेको एआइजी सरुवा नै रद्द गरेर एक महिनापछि फेरि अर्काे सरुवा गरिएको थियो । त्यस्तै एसपी सरुवामा पनि त्यस्तै बेथिती देखिएको छ । बदनाम र काँग्रेस निकट प्रहरी अधिकारीहरु संगठनमा यतिबेला हाबी भएका छन् ।
सम्पत्ति पनि गोप्य, छैन कुनै कार्ययोजना
कुलमान घिसिङलाई नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गर्नुलाई ठूलो सफलतामा राखिएको छ । अर्काे हास्यासपद तर्क कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई राखिएको छ । जबकि, त्यो अघिल्लो सरकारले बजेटमा नै ल्याएको विषय थियो । भूमी आयोगको गठनलाई पनि सरकारको सफलता मानिएको छ । ओली सरकारले गठन गरेको आयोगलाई खारेज गरी यो आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसमा पनि विज्ञभन्दा सबै पार्टीका कार्यकर्ता राखिएको छ ।
यही तरिकाले देउवा अघि बढे आगामी निर्वाचनमा काँग्रेसको अवस्था २०७४ भन्दा केही फरक नहुने काँग्रेस नेताहरुको चिन्ता छ । तर, आफ्ना कमजोरीमा सुधार गर्ने उनको कुनै इच्छासमेत देखिएको छैन । यसरी सरकार असफल हुँदै गर्दा त्यसको असर मंसिरमा हुने महाधिवेशनमा समेत पर्ने सम्भावना छ । देउवाबाट आजित महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले उनको विकल्पको खोजीमा लाग्ने सम्भावना देखिएको छ ।
मन्त्रालयकै सबैभन्दा विवादास्पद डा. आपरी बिच्छालाई विभागको महानिर्देशक बनाएर ठेक्कामा सेटिङ भइरहेको छ । बिच्छा केही महिनापछि नै अवकाश पाउने भएकाले यही बेला उनी कमाउन केन्द्रित भएका छन् । स्वास्थ्य मात्र होइन, कर्मचारी सरुवामा पैसाको चलखेल हुने भौतिक, सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयमा पनि बिचौलियामार्फत पैसा उठाउने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २२ वटा मन्त्रालय हुन्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि गन्ति हुन्छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ५ मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री गन्दा ६ मन्त्रालयमा मन्त्री छन् ।
बुधबार काँग्रेस नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएसँगै ७ मन्त्रालयमा मन्त्री पुगेका छन् । बाँकी सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । बाँकी रहेका १५ मन्त्रालयमा आरजुकै खटनपटन चल्दै आएको छ ।